Previous Article E Tòóla Gọọmenti Anambra Maka Ezi Ọrụ Ya n'Ịkwàlite Ahụike
Next Article Gọọmenti Anambra Na WHO Enyela Ndị Ọdekpe Nkuzi Maka Iju Mmiri • Nye Ha Ọgwụgwọ n'efu
Ọ bụ kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti Anambra, bụ Dọkịta Vincent Ọkpala kwupùtàrà nke a oge ya na ndị nta akụkọ na-akparịta ụka n'isi ụlọ ya dị n'Awka bànyere mmemme ụbọchị ọrịa ịba ọcha n'anya na mba ụwa nke ahọ 2019. O kwuru na ala Nigeria so n'otu n'ime mba ọrịa ịba ọcha n'anya si agbasàwanye na mba ụwa dị iche-iche, n'ogoogo dịka pasentị iri na ótù nkịe ọrịa ịba ọcha n'anya B na pasenti abụọ na ụma abụọ nke ịba ọcha n'anya CH, bụkwa nke mkpokọta ya pụtara na mmadụ karịrị ndè iri abụọ nà-arịa ya bụ ọrịa n'ala anyị, ma bụrụkwa ndị amaghị banyere ihe egwù dị na ya, nakwa otu o si emetụta wee na-emetụta akụrụ mmadụ.
O mekwàzịrị ka a mara na gọọmenti steeti ahụ na-agbasi mbọ ike esepughị aka ma na-ebukwa agha dị egwu ịhụ na e memìlàrà ya bụ ọrịa ma nyekwa ya ọsọ ụkwụ erughị ala na steeti ahụ.
Na ntụnye nke ya, onyeisi nhazi atụmatụ ahụike ọhaneze na steeti ahụ, bụ Dọkịta Udechukwu Onyejimbe kọwara mkpa ọ dị na e nyèrè ya ajọ ọrịa ahụ ọsọ na steeti ahụ, ma kpọkwazie òkù ka onye ọbụla tinye aka n'ọrụ ịhụ na nke ahụ pụtara ìhè na ya bụ steeti.
Na nkọwa ya bànyere ya bụ ọrịa, o mere ka a mara na ọ na-eme ka akụrụ mmadụ zaa azaa, ma kwuokwa na e nwèrè ọrịa ịba ọcha n'anya A,B,CH,D na E, ya na ụzọ dị iche ha si agbasà, ụzọ e si achọpụta ha, nakwa ụzọ dị iche-iche e si egbochi ha.
Ọ bụ n'abalị iri abụọ na asatọ nke ọnwa ọbụla Julaị ahọ ọbụla ka a na-emerùbe mmemme ụbọchị ọrịa ọcha n'anya na mba ụwa, ma isi ụlọ ọrụ na-ahụ maka ahụike na steeti ahụ màliterè nke ahọ a, na njikọ aka ha na ndị òtù Rotary Club Awka site n'inye ndị ọrụ oyibo na steeti ahụ nnyòcha n'efu maka ya bụ ọrịa.
Isiokwu mmemme ahụ nke ahọ a bụ "Tinye Ego n'Imemìlà Ọrịa Ịba Ọcha n'Anya", nke pụtara, ma a sụgharịa ya “Invest in Eliminating Hepatitis”.